Dhar, kutub iyo daawo oo Loo Diray Samsam Laakiin aan ayadii gaarin!
Ilaa maalintii Samsam Axmed Ducaalle koox burcad ahi ku afduubeen Hargeysa ayaa waxaa haystey dhibaato xun, oo la xariirta xagga caafimaadka iyo cuntada.
Waxaa aad looga dayrinayaa xaaladeeda nololeed, maadaama aysan helin wax daryeel ah sidii loogu geestey jirdilka iyo kufsiga. Waxaa kale oo la soo gudboonaadey arad ama dhar la’aan maadaama dharkeedii qaarna la jeexjeexay qaarna laga furtay.
Waxaan la soconaa haddaan nahay qaraabadeeda in ay Samsam ku jirto god nus mitir ah, oo aan musqul iyo qubays midna lahayn. Labaatan iyo afartii saac mar ay kufsadayaashu waxay irid yar uga tuuraan xabad rooti ah, oo aan biyo shaah midna lahayn. Habeenkii waxay ku seexataa fadhiga, laakiin waa haddii aan kufsi loola bixin. Qofkii Samsam idhaha saara oo bani’aadanimu ku danbayso waxuu la muraaradilaacayaa silica iyo saxariita wajeega ka muuqda.
Haddaan u leexano dulucda qoraalka, waxaa Samsam loo diray dhar, kutub iyo daawo, laakiin nasiibdaro hadiyadaas ma gaarin, oo waxaa dhexda uga baxay kooxdii qowlaysatada ahayd, ee ay xukumeen Axmed Yuusuf Yaasiin iyo Maxamed Cige Cilmi. Dharkii iyo daawadii waxaa la wareegey maleyshiyada raggaas aan xusnay, kutubtiina waxaa laga dhigay wax la gubey iyo wax la jeexjeexay.
Faafin: SomaliTalk.com | Dec 27, 2004